सेक्सप्रति रुची नहुनु के रोग हो ? यस्ता छन् कारण र परिणाम | Sambad Media
सेक्सप्रति रुची नहुनु के रोग हो ? यस्ता छन् कारण र परिणाम
२२ अक्टोबरदेखि २८ अक्टोबरसम्म एसेक्शुअलिटी अवेयरनेश साता मनाइँदैछ । यसको उद्देश्य यो विषयमा जागरुकता ल्याउनु हो । एसेक्शुअल त्यस्ता मानिसलाई भन्ने गरिन्छ, जसलाई कसैप्रति पनि यौन आकर्षण महशुस नै हुँदैन ।
एसेक्शुअलिटी भारतका सहसंस्थापक पूर्णिमा कुमारका अनुसार, जसरी केही व्यक्ति विपरीत लिङ्गीमा रुची राख्छन् (हेट्रोसेक्शुअल), केही व्यक्ति समान लिङ्गीप्रति आकर्षित हुन्छन् (होमोसेक्शुअल), ठिक त्यसरी नै केही व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन् जो कसैप्रति पनि यौन आकर्षण महशुस गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्ति एसेक्शुअलको श्रेणीमा पर्दछन् ।
एसेक्सुअलिटी इन्डिया एउटा अनलाइन पोर्टल हो, जुन भारतका एसेक्शुअलहरुलाई आफूजस्तै अन्यसँग परिचित गराउने काम गर्दछ । बीबीसीसँगको कुराकानीमा पूर्णिमाले बताए कि यद्यपि एसेक्शुअलिटीका अधिकांश घटना ठुला सहरमा देखा परेको छ।
पूर्णिमाका अनुसार एसेक्शुअलिटीको अर्थ यो होइन कि यस्ता मानिस सेक्स गर्न सक्दैनन् । शारीरिक रुपमा पूर्ण फिट भएर पनि यस्तो हुन सक्दछ कि कसैप्रति सेक्स गर्ने रुची नहोस् र यो यस्ता व्यक्तिका लागि बिल्कुलै सामान्य हो ।
शारीरिक सम्बन्धका चार चरण
सेक्शुअल मेडिसिनका सल्लाहकार तथा पद्यश्रीबाट सम्मानित डाक्टर प्रकाश कोठारी भने यो कुरामा सहमत छैनन् । उनका अनुसार यो जेनेटिक स्ट्रक्चर हो । बाँकी यौन रुझानजस्तै यो पनि जन्मजात हुने गर्दछ ।
बीबीसीसँग कुरा गदै कोठारीले एसेक्शुअल मानिस शारीरिक सम्बन्ध राख्न नसक्ने र सन्तान जन्माउन नसक्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताए । तर, उनीहरुमा यस्तो चाहना नै नहुने उनको भनाइ छ ।
डाक्टर कोठारीका अनुसार शारीरिक सम्बन्धका चार चरण हुने गर्दछन्–इच्छा, उत्तेजना, प्रवेश र चरमोत्कर्ष । एसेक्शुअल मानिसमा पहिलो चरण अर्थात इच्छा नै हुँदैन । त्यसैले शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेकै खण्डमा पनि एसेक्शुअल पार्टनरको सहयोग पाउन कठिन हुने गर्दछ ।
चर्चित क्लीनिकल साइकोलजिस्ट अरुणा ब्रुताका अनुसार यौनप्रति रुची नहुने सबै घटना एसेक्शुअलिटी नै हो भन्न सकिन्न । डाक्टर ब्रुटाका अनुसार कतिपय अवस्थामा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित डिसअर्डरजस्ता हर्मोनल असन्तुलन, थायरायड, डायबिटिज वा शुक्राणुको कामीका कारण पनि यौनप्रतिको रुचीमा असर पर्न सक्दछ ।
यदि तपाईलाई पनि यस्तो भएको महशुस भए तपाईले तत्कालै युरोलजिस्टको सुझाव लिनु उपयुक्त हुने छ। यदि सबै टेस्ट नर्मल छ भने कुनै साइकोलजिस्ट भेटेर पर्सनैलिटी टेस्ट गराउनु उपयुक्त हुनेछ । यौन रुझान जान्नका लागि यो उत्तम तरिका हो ।
एकपटक एसेक्शुअलिटी तय भएपछि उक्त व्यक्तिलाई सामान्य गराउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका परिवारको हुने गर्दछ ।
डाक्टर ब्रुटाको सुझाव
–एसेक्शुखल व्यक्तिलाई यो र त्यो नभन्नुस । उनीमाथि कुटपिट नगर्नुस । उनको व्यक्तित्व स्वीकार गर्नुस ।
–उनलाई आफ्नो पहिचान अपनाउन सहयोग गर्नुस् । उनमा आत्मविश्वास जगाउनुस् ।
–उनलाई ठट्टाको विषय नबनाउनुस्, न त अरु कसैलाई त्यसो गर्न दिनुस् ।
–उनको स्थितिलाई बुझ्नुस्, उनको कुरा सुन्नुस् र उसको मनमा कुनै हिन भावना आउन नदिनुस् ।
–कहिलेकाँहि स्वयमको नयाँ पहिचानसँग तालमेल मिलाउने संघर्षमा, यस्ता व्यक्तिहरु केही मुडी वा एग्रेसिभ पनि बन्ने गर्दछन् । केही घटनामा डिप्रेशन वा बाय–पोलर डिसअर्डर पनि देखिने गर्दछ । यस्तोमा उसको साथ नछोड्नुस र पूरा उपचार गराउनुस् ।
–एसेक्शुअल व्यक्तिलाई विवाह गर्न दबाव नदिनुस्।
केही घटनामा बाल्यकालको कुनै घटना, चोट वा झट्काका कारण पनि केही व्यक्तिमा यौनप्रति रुची अन्त्य हुन सक्दछ । त।m हरेक एसेक्शुअलका साथ यही भएको मान्नु पनि गलत हुनेछ ।
जानकारहरुको यसमा एउटा राय छ कि एक्युट एसेक्शुअलिटी भगवानकै देन हो र यस विषयमा समाज सहज, संवेदनशील र समझदार बन्नु पर्दछ ।बीबीसी हिन्दी
रूसको राजधानीमा सम्मान र शुभकामना समारोह सुसम्पन्न–कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ
विद्यार्थीले जुटाए साथीलाई सहयोग
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काम गरेर पनि किन राष्ट्रिय… (2,547)
११ लाख लिएर अर्कैसँग टाप कसेकी अ्बिका पौडेलका… (2,433)
पुरुषको कट्टु किन बढी फोहोर हुन्छ, महिलाको किन सफा ?… (2,005)
बुद्ध लामाको आफन्त र निशानको आमा बीच एरपोर्टमै भनाभन… (1,635)
© 2018 Sambad Media. All Rights Reserved Pahichan Media Pvt. Ltd. COPY THIS- - Developed by SUMAN SHRESTHA